Maalinta: Meey 26, 2018
Cimilada cusub ee garoonka diyaaradaha ee Istanbul 20 Euro
29 IGA, oo shaqadiisu u qorsheysan tahay garoonka diyaaradaha ee cusub ee Istanbul bishii Oktoobar, wuxuu bilaabay inuu warqad u diro shirkadaha diyaaradaha ee loogu talagalay canshuuraha daboolaya adeegyada marinnada iyo rakaabka. Waraaqda oo soo gaarta Kokpit.aero ayaa sida caadiga ah ka socota garoonka diyaaradaha ee Atatürk Istanbul [More ...]
Ahmet Arslan, Wasiirka Gaadiidka, Arimaha Badaha iyo Isgaarsiinta, wuxuu cadeeyay in ay jiraan ku dhawaad ​​7,5 milyan oo xadgudubyo ah oo lagu sameeyay buundooyinka iyo wadooyinka waaweyn ee hoos yimaada masuuliyada dowlada. [More ...]
Habeynta Cusub ee Saacadaha Safarka Saacadaha ee Eskisehir
Ka sokow Xarunta Dhaqdhaqaaqa oo ku taal agagaarka Saldhigga Baska, ESTRAM waxay bixisaa xarun cusub oo taraamyada aagga Tepebaşı. Iyadoo xarunta cusub loo adeegsan doono Batıkent-SSK iyo Çamlıca-SSK trams [More ...]
Ammaanka Gaadiidka Cusub ee Saldhiga Basaska iyo hareeraheeda gudaha gudaha ee Buca Tunnel Works
Dawlada Hoose ee Magaalada İzmir waxay kuxiran doontaa Buca ilaa Baska, 27 waxay badali doontaa qulqulka taraafikada gudaha iyo hareeraha boosteejada baska ee Bornova illaa iyo Axada Axada. Dowladda Hoose ee Magaalada polzmir, Buca Tunnels oo dhismaheeda socdo [More ...]
Kuwa yaryar haysta waxay rajaynayaan rajo
Waxqabadka hal abuurka saynisyahannada hal abuurka leh ee cusub İzmir ee loogu talagalay carruurta dugsiga hore ee İzmir Magaalo-weyne waxay ku sii badatay gobolka Bornova kadib Beydağ iyo Foça. "Alifay Tiny" rajo weyn ka wakiil ah mustaqbalka dhalaalaya oo Turkey ah [More ...]
Udem Hak-Sen Zonguldak Gobolka Sener Yalcinkaya
Ururka Shaqaalaha iyo Gaadiidka (Udem Hak-Sen) ayaa loo magacaabay inuu noqdo Gudoomiyaha Gobolka ee Zonguldak, Sarkaalka waxqabadka Şener Yalçınkaya, kaasoo muujiyey adeeg heer sare ah iyo guul. Udem Hak-Sen, Ma jiro taageere xisbi siyaasadeed ama taliye [More ...]
Ankara oo loo yaqaan "YHT Line" Istanbul inta lagu guda jiro bisha barakaysan ee Ramadan
Socdaal Dheeri ah oo lagu tagayo Ankara Istanbul YHT Line inta lagu jiro Ciidda Ramadaanka: TCDD Taşımacılık A.Ş. [More ...]
Natiijooyinka Imtixaanka Dib-u-habeynta iyo Is-beddelka TCDD ayaa la soo bandhigay
The Republic of Turkey Tareennada State (TCDD) ku dhawaaqay natiijada imtixaanka qoraalka ee lagu qabtay kaca xafiiska by 12-13 May ee. Natiijooyinka Imtixaanka Qoraalka ah ee loo yaqaan 'TCDD' iyo natiijada Imtixaanka Qoraalka Isbedelka Cinwaanka ayaa lagu dhawaaqay. 13 Maajo 2018 [More ...]
Tababarka Wadajirka Bulshada iyo Tababarista Tacliinta
24 loogu talagalay tababbarka iskaashiga bulshada iyo kor u qaadista tareenka arasında gudaha qaab dhismeedka Tanıtım Dhiirrigelinta Iskaashiga Bulshada, Tababbarka, Horumarinta iyo hirgelinta Mashruuca arasında ee u dhexeeya TCDD Taşımacılık AŞ iyo Agaasimaha Guud ee Iskaashiga Iskaashiga [More ...]